आशिष अविरल : 'मुरली केटो' टु 'भाइरल म्यान'
आशिष अविरल गोठालो जाँदा होस् या एक्लै कुनै काममा भुल्दा गोजीमा मुरली बोकेर हिँड्थे । र त्यसमा सुन्दर ध्वनि निकाल्थे ।
एकांकी स्वभाव भएका कारण आफ्ना कुराहरू अरूलाई भन्न लजाउँथे । आफ्ना मनमा लागेका कुराहरू मुरलीमार्फत बाहिर सुनाउँथे । उनी अरूभन्दा फरक थिए । हरेक कुराहरूलाई विकल्पका रूपमा सोच्ने बानी उनको बच्चैदेखि हो । उदाहरण आफ्नै दिन्छन् उनी, ' खोलाको बीचमा ढुंगा देख्दा पनि यदि त्यो ढुंगा त्यहाँ नभएको भए खोला कसरी बग्थ्यो भनेर सोच्थेँ ।'
पहिलापहिला उनका बुवाले मुरली बनाएर बजाउन दिए पनि त्यसको निरन्तरता लामो समयसम्म रहेन । उनी मुरली फुटाइरहन्थे । बनाएको मुरली फुट्ने गरेको थाहा पाएपछि उनले झिँजो मान्दै भनेछन्- अब म सक्दिनँ । आफैं बना ।
पछि आशिषले आफैं मुरली बनाउन थाले । आफूले बनाएको मुरली बजाए पनि । तर मुरलीबाट निस्केको धुनले उनलाई छुन सक्दैन्थ्यो अनि फोडिदिन्थे । 'म मुरली आफैं बनाएर बजाउँथेँ । तर बजाउँदा मलाई केके मन पर्थेन । मलाई दिक्क लाग्यो । भनेजस्तो नबजेपछि कड्याक्क टोक्यो फोड्यो । फेरि भोलिपल्ट बजाउन मन लाग्छ फेरि बनाउने र बजाउने क्रम शुरू भइहाल्थ्यो ।'
उनले आफूले बनाएको मुरली नियमअनुसार नभएको भेउ पछिमात्र पाए ।
'मुरलीमा हुने प्वालहरूमा निश्चित नियम हुँदो रहेछ । हरेक प्वालहरूको दुरी फरक हुँदो रहेछ । तर मैले चाहिँ बराबरमा छेड्थेँ,' बाल्यकाल र मुरलीका प्रसंगहरू कोट्याउँदै उनी भन्छन्, 'बराबरमा पार्दा बेसुरा धुन आउँदो रहेछ । मलाई थाहा भएन यो बेसुरा बज्यो । तर मैले बजाउन खोजेको सुर नबज्दा मैले फोडिदिएँ ।'
मुरली फोड्नुको कारण उनले पछिमात्र थाहा पाए । बच्चा बेलामा पनि उनको दिमागले भित्रीरूपमा सुर यस्तो हुनुपर्छ भन्ने चाल पाएको रहेछ । सुनाउँछन्, 'त्यो बेलामा पनि मेरो माइन्डले अनकन्सियस्ली सुर भन्ने कुरा ट्रीक गरेको रहेछ ।
उनले मुरली बजाउने गरेको गाउँलेलाई पनि थाहा थियो । स्कूलमा कार्यक्रम हुने भएपछि उनलाई पनि बाँसुरी बजाउन भनियो । जब उनले बाँसुरी बजाउन थाले । सबै साइलेन्स भए । भोलिपल्ट निकै चर्चा भयो आशिषले यस्तो राम्रो मुरली बजाउँदो रहेछ । त्यसपछि उनको गाउँमा नाम रह्यो- मुरली केटो ।
भन्छन्, 'गाउँलेहरूले मलाई बोलाउन पर्दा 'मुरली केटो' भन्न थाले ।'
उनी बागलुङको गाउँमा हुँदा गीत पनि गाउँथे । भक्तराज आचार्य, नारायण गोपालका गीतहरू उनले मुरलीबाटै उठाउँथे ।
मुरली मात्रै होइन उनी हार्मोनियम पनि बजाउँथे । घुम्टे युवा परिवार भन्ने क्लब थियो । क्लबका सांस्कृतिक संयोजक आशिषका दाइ राजकुमार थिए । उनको दाइले हार्मोनियम ल्याउँथे । उनी बजाउँथे । तर शुरूशुरूमा हार्मोनियम छुन पनि पाउँदैनथे रे उनले । बाल्यकाल स्मरण गर्छन् उनी, 'पहिला दाइहरूले बजाउन दिनुहुन्नथ्यो । उहाँले छोडेर गएको बेलामा सिक्थेँ ।'
धुनसँग खेल्ने बानी भइसकेको थियो आशिषको । मुरलीमा धुन निकाल्ने उनले हार्मोनियममा पनि त्यही क्रम दिन खोज्थे तर उनको ज्ञानले भ्याउँदैनथ्यो । उनी जसरी पनि हार्मोनियम सिकेरै छाड्ने ध्याउन्नमा थिए । एकदिन आफन्त तेजबहादुरको घरमा गए । संयोगवश त्यहाँ पनि हार्मोनियम रहेछ । उनलाई भनेजस्तो भइदियो । दाइहरू नभएको बेलामा उनले दिनभर हार्मोनियमका कीहरू दबाए । एकदिनमा उनले हार्मोनियम राम्रोसँग बजाउन सक्ने भए ।
बेलुका उनले राम्रोसँग हार्मोनियम बजाउन सक्छ भन्ने दाइहरूले भेउ पाए रे ! भन्छन्- दाइहरूको अगाडि बजाएँ । उहाँहरूले राम्रो छ भन्नुभयो ।
त्यसपछि घरमा छुन नपाउने हार्मोनियम उनको कब्जामा आयो ।
'त्यसपछि विद्रोही बनेँ'
आशिषका बुवाले सनहाइ बजाउने अनि टेलिरिङको काम पनि गर्छन् । त्यतिबेला बालीघरे प्रभा थियो । चार-पाँच ठाउँमा विवाह जुध्दा आशिष पनि झुर्मा बजाउन जानुपर्थ्यो ।
एक जना ठकुरीको घरमा विवाह थियो । उनीहरूको घरको लुगा हाम्रो आशिषका बुवाले सिलाउँथे । बाजा बजाउन जानुपर्ने घर मामाघर नजिक भएकाले उनी गए । बाजा बजाउन भन्दा पनि उनमा मामाघर जान पाइन्छ भन्ने आशले बुवासँगै हिँडे ।
मंसिरको चिसोमा सानो झ्याली बजाइरहेको थिए । उनलाई एक जनाले अति हेपेको भेउ पाए । भन्छन्- एकजना मोटे मान्छे बाजाको तालमा नाच्दैनाच्दै आउने अनि मलाई कुल्चिने गर्न थाल्यो । फेरि एक फन्को घुम्छ । मलाई घ्वाच्च कुल्चिन्छ ।
लगातार कुल्चेपछि उनी रुन थाले । अरूले किन रोएको भन्दा अरूले जवाफ दिए रे- बुवा मामाघर गएकाले यो रोएको हो !
त्यसदिनदेखि उनमा विद्रोही स्वभावको विकास भयो । र उनी हत्तपत्त बाजा बजाउन पनि गएनन् ।
उनले मसालको रक्तिममा पनि गीत गाइसकेका थिए । लोकदेखि आधुनिक गीतहरू पनि गाउँथे ।
उनको दाइ राजकुमार गीत राम्रो गाउँथे । प्रतियोगिताहरू पनि भाग लिन्थे । बागलुङ गलकोटमा सबैले चिन्थे रे !
दाइलाई अरूले राम्रो गाउँछस् भन्दा उनले जवाफ हुन्थ्यो रे- म भन्दा मेरो भाइ आशिषले एकदम राम्रो गाउँछ ।
उनले यस्तो सुनेपछि आफूमा केही छ कि भन्ने लाग्न थालेछ ।
जिविसको कार्यक्रममा हुँदा उनले एउटा गीत गाए । जसलाई मानिसहरूले एकदमै मन पराए । गीत गाएपछि एक जना शिक्षकले उनलाई दिएको प्रतिक्रिया उनले सम्झिरहन्छन् । भन्छन्, गीत सुनेपछि झोपेन्द्र थापा भन्ने अंग्रेजी पढाउने शिक्षकले भन्नुभयो- बाबु तिमीमा मैले प्रचुर सम्भावना देखेँ । तिमी यहाँ नबस । तिमी काठमाडौं जाउ । संगीतमा केही गर ।'
त्यस्तै अर्का एक जना वकिलले पनि उनलाई त्यस्तै भनेका थिए रे ! सुनाउँछन्- अर्का एक जना वकिलले पनि भन्नुभयो- अर्को वर्ष यहाँ बस्या थाहा पाएँ भने पिटाइ खानुहुन्छ ।
सबैले आशिषलाई बागलुङ नबस, संगीतमै केही गर भनेर सुझाव दिएपछि उनको मन बिथोलियो । र हानिए- पोखरा ।
पोखरामा उनका दाइ थिए । दाइसँग बस्न भनेर उनी आए । त्यहाँ एक जना खेम लामा 'दाइ' थिए । उनले तबला बजाउँथे । एकदिन खेम लामाले आशिषलाई भनेछन्- ल भाइ, एउटा गीत गाउ त !
उनले गाए ।
त्यसपछि खेमले भनेछन्- तिमीमा संगीतको सेन्स रहेछ । राम्रो गायौ । तिमी यहाँ नबस । काठमाडौं नै जाउ । संगीत सिक ।
आशिषले जहाँ गीत गाएपनि, जसलाई सुनाएपनि 'राम्रो गायौ', 'यहाँ नबस' भन्ने प्रतिक्रिया पाएपछि सोचे- अब साँच्चिकै काठमाडौं जान्छु अनि संगीत सिक्छु ।
उनी पोखराबाट घर फर्के ।
अनि बालाई भने- बा, म त काठमाडौं जान्छु ।
तर उनका बा रिसाएर फायर भए । अनि बाले आशिषलाई भनेछन्- यहीँ प्लस टु खुलेको छ । यहाँ पढ्न छोडेर बागलुङ गइस् । त्यहाँ पनि नपुगेर पोखरा गइस् । अहिले काठमाडौं जान्छु भन्दैछस् । भोलि अमेरिका जान्छु भन्लास् । मैले त सक्दिनँ नि त्यसरी ।
तर आशिषले मानेनन् । उनको जिद्दी सामु बाको केही जोर चलेन । भन्छन्, '२०५७ सालमा बासँग विद्रोह गरेर म काठमाडौं आएँ ।'
आशिष काठमाडौं त आए तर बस्ने बास थिएन । होटलमा बस्न सम्भव नभएपछि उनी एक जना साथीसँग बस्न थाले । तर साथी कोठा सरेर गइदियो । उनी पनि हिँड्नुपर्‍यो ।
त्यसपछि उनी बास खोज्दै दुर्गा नेपाली 'दाइ'को मा पुगे । उनी आर्मी थिए । वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालमा तालिमका लागि आएका दुर्गालाई उनले फोन गरेर भेटे ।
दाइलाई उनले आफ्नो व्यथा सुनाए । 'म त बेसहारा भएँ । त्यो केटा नि अन्तै सर्‍यो । मेरो बिचल्ली भयो, ' उनले दुर्गालाई ठ्याक्कै यही भनेका थिए रे !
अनि दुर्गाले भनेछन्- ल अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म यहिँ बस । त्यहाँ उनी दुई महिनाजति बसे । त्यसपछि विजेश्वरी छात्रावासमा बस्नका लागि गए । वार्डेनलाई भेटे । उनले ठाउँ छैन भने । यताउता मिलाएर बस्न पाइन्छ भन्ने उनले सुने ।
उनी संगीतको नशाका कारण जहाँ जाँदा पनि किबोर्ड झोलामा किबोर्ड बोकेर हँड्थे । त्यसैबीच विष्णु परियारसँग उनको भेट भयो ।
उनीहरूबीचको भलाकुसारी :
झोलामा किबोर्ड हो ?
तपाईं कलाकार हो ?
गीत गाउनुहुन्छ त ?
अँ गाउँछु ।
ल गाउनु न त एउटा गीत ।
उनले किबोर्ड बजाएर गीत सुनाए ।
त्यसपछि गीत सुन्ने लोभमा विष्णुले आशिषलाई उनको रूममा राखे ।
बास पक्का भएपछि उनको ध्यान संगीतमै गयो । डोरेमीमा उनले संगीत सिक्न थाले ।
संगीत सिक्दै गर्दा उनको घाँटीमा समस्या शुरू भयो । रियाज गर्दा पनि समस्या हुन थाल्यो । त्यसपछि आफू फ्रस्टेसनको चरणमा पुगेको उनले सुनाए । आफूमा गाउन सक्ने क्षमता हराएर गएको हो कि भन्ने शंका पनि उनलाई लाग्यो ।
काठमाडौंमा गायक सपना सपना बोकेका आशिषलाई ठूलो धक्का लाग्यो । घाँटी निको बनाउन उनले अनेक गरे । 'निबुवाको पात पानीमा उमालेर खाए हुन्छ भन्ने सुनेर त्यो पनि गरेँ, ' कठिन परिस्थितिलाई सम्झिए उनले ।
उनी मोडिए एरेन्जतर्फ । एरेन्ज यस्तो हुन्छ भन्ने पनि थाहा पाए । रेडियो नेपालको गायन प्रतियोगितामा पनि भाग लिएका उनले पूर्ण नेपालीले गीत रेकर्ड गराइदिन्छु भनेर गरेको वाचा सम्झिए । र उनलाई खोज्न थाले । उनलाई खोज्दै आशिष ग्रोटो रेकर्डिङ स्टुडियोमा पुगे । त्यहाँ गीत रेकर्ड गरे ।
पहिलोपटक स्टुडियो छिरेर कानमा हेडफोन लगाएर आफूले गाएको आवाजलाई उनी 'अविस्मरणीय' भन्छन् । 'मैले त्यतिबेला हेडफोनमा सुन्दा जति पाएको आनन्द अहिलेसम्म पाएको छैन,' अतीत केलाउँछन् उनी ।
पछि उनी पुन: गाउँ फर्के । बिहेवारी भयो । बोर्डिङ स्कूलमा पढाउन थाले । तर म्युजिकको हुटहुटीले उनलाई कहाँ छाड्थ्यो र ? अरूको गीत आयो भनेपछि उनको मन भतक्कै पोल्थ्यो । मैले किन सकिनँ होला भनेर सोच्थे रे !
जागिर छाडेर उनी काठमाडौं आउने भए ।
बाको अनुमति मागे ।
अनि उनले बालाई भने- म २५ सय ३ हजारको जागिर गर्दिनँ काठमाडौं गएर एउटै गीतबाट यहाँ महिनामा कमाउने पैसा कमाउँछु ।
बाले झर्केर भनेछन्- अँ, तँलाई थैला राखिदिएको छ र कमाउछस् ।
उनले बालाई फकाउन प्रयास गरिरहे, 'हुन्छ बा हुन्छ ।'
बाले फेरी भने, 'धत् गाएर नाचेर पनि कसैले पैसा कमाउँछ त ?'
उनको जिद्दीका अगाडि बुवाको जोर चलेन । उनी काठमाडौं हिँडे ।
काठमाडौं आएर एरेन्ज सिकेपछि उनी एनजीओमा काम गर्न थाले । म्युजिकमा पुन: ब्याक ।
पछि संगीतको हुटहुटीले उनलाई तान्यो अनि निकाले- बास्ना एल्बम ।
बास्ना एल्मबको 'बर्बर आँसु झार्दा खेरि'मा भन्ने लोकगीत एरेन्ज गरे । पानी कुवाको भन्ने गीत पनि बजारमा आयो । ती राम्रै चले ।
उनले 'तिमी बिनाको जीवन' पनि कम्पोज गरे । त्यो नै उनको सांगीतिक जीवनमा 'टर्निङ प्वोइन्ट' बन्न पुग्यो । अनि आशिषले सांगीतिक क्षेत्रमा पछाडि फर्केर हेर्नु परेन ।
'दुनियाँ बेग्लै छ' भन्ने गीत कम्पोज गरेर उनले डान्सिङ नम्बर गर्न सक्छु भनेर प्रमाणित गरिसकेका थिए । यसैबीछ टीका प्रसाईं र संजीव पराजुलीले उनलाई भनेछन्- एउटा गीत दिनुपर्‍यो ।
उनलाई पनि एकनारायण भण्डारीसँग काम गर्ने चाहना थियो । उनले पनि एकनारायणलाई भने- दाई एउटा गीत दिनुपर्‍यो । एकनारायणले गीत दिए ।
गीतको थियो- नाईँ मलाई थाहा छैन । तर उनलाई त्यो कसरी कम्पोज गर्ने भन्ने भयो ।
गीतबारे उनी भन्छन्, 'गीत जति सिम्पल छ, यसको भाव त्यति नै जटिल छ । यो गीतको इसेन्स निकै हाइ छ । यसमा एउटा महिलाको साइकोलोजी छ । जुन कि एउटा महिलाले थाहा भएर पनि थाहा छैन भनिरा'छ ।'
त्यो शब्दलाई कसरी गर्ने भन्ने उनलाई गाह्रो भयो । उनले आफ्नै तरिकाले गीत बनाए ।
मन पराउँदैनन् कि भनेर उनले टिका र संजीवलाई गीत सुनाए । तर उनीहरूले मन पराइदिए । पहिलो भर्जनमा उनले एरेन्जको जिम्मा अल्मोडा राना उप्रेतीलाई दिए । दोस्रो भर्जनमा आफैंले एरेन्ज गरे ।
त्यसपछि कार्टून क्रूजमार्फत भिडियो बन्यो । त्यो सुपर हिट बन्यो । अझै पनि उनी 'नाईं मलाई थाहा छैन'लाई सांगीतिक जीवनको दोस्रो अध्याय भन्छन् ।
अविरल होइन अ'भाइरल
आशिष अविरललाई अहिले धेरैले 'भाइरलम्यान', 'भाइरल किङ', अ'भाइरल भनेर सम्बोधन गर्न थालेका छन् । उनलाई भाइरल जोडेर सम्बोधन गरिनुको एउटै कारण छ- लगातार भाइरल गीत दिनु ।
उनको संगीतमा रहेको 'नाइँ मलाई था'छैन' गीत बजारमा आउनेबित्तिकै हिट भयो । धेरैको मुखमा झुण्डियो । मतलव भाइरल भयो । यो गीतले युट्युबमा ३ करोड ९० लाखभन्दा बढी भ्युज पाएको छ ।
टिका प्रसाइँ र सञ्जीव पराजुलीले गाएको गीत 'कर्के नगर'को संगीत पनि आशिषले नै दिएका हुन् । यो गीत हालसम्म २ करोडभन्दा बढी पटक हेरिएको छ ।
त्यस्तै आशिषकै संगीत तथा एरेन्ज रहेको अर्को हिट गीत हो- माया लुकीलुकी । यसलाई पनि टिका र सञ्जीवले गाएका छन् । यो गीत युट्युबमा लगभग ७ करोड पटक हेरिएको छ ।
प्रमोद खरेलले गाएको 'यो कुरा गोप्य' तथा आफैंले गाएको 'परान परान' गीत पनि करोड क्लबमा प्रवेश गरिसकेका छन् ।
उनको संगीत तथा एरेन्ज गरेका गीत एक दर्जन गीत करोड क्लबमा पुगेका छन् । यसैले उनलाई 'भाइरलम्यान' भन्न थालिएको हो ।
अन्तिममा लोकान्तरकर्मीले सोधेको थियो तपाईंका गीत किन भाइरल हुन्छन् ? उनले जवाफ दिएका थिए- मैले कुनै पनि जनराको गीतलाई त्यसको इथिक्स बुझेर गर्ने प्रयास गरेको हुन्छु । स्रोताहरूको साइकोलोजी बुझेर गीतको काम गर्छु । मैले म्युजिकमा अरूको भन्दा छुट्टै वे बनाएँ त्यो मानिसहरूलाई मन परेर पनि हुन सक्छ ।
तनहुँमा पहिरोले किशोरीको मृत्यु, ५ जना बेपत्ता